हेर्नुस २०७६ पौष ०३ गते बिहिबारको राशिफल – सजल सन्देश
हेर्नुस २०७६ पौष ०३ गते बिहिबारको राशिफल
By Sajal sandesh	 On२ पुष २०७६, बुधबार १३:०६
२०७६ पौष ०३ गते बिहिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
‘प्रधानमन्त्रीको उपचार राज्यले गर्छ, हाम्रो कसले गर्छ ? ‘बालुवाटारमा मृगौला पीडितहरुको धर्ना